MAME: maitiro ekuisa uye kunakidzwa nawo pane yako Linux kugovera | Linux Vakapindwa muropa
Maitiro ekuisa MAME uye unakirwe neiyi Arcade mutambo emulator pane Linux
pablinux | | Linux Mitambo
Mazuva ano ndayeuchidzwa nezve iyo Arcade mitambo yeiyo '80s uye' 90s. Mushure menguva yakati yekukora zvibodzwa uye kuhwina machisi, ndakatarisa kuti ndione kana paine chero ruzivo pano paLinux Vakapindwa muropa uye ndakashamisika kuti pakange pasina, saka ndakafunga kunyora chinyorwa nezve maitiro ekuisa MAME pane Linux uye maitiro ekugadzirisa mamwe matambudziko nemaROM (mitambo).
Kuisa MAME paLinux kuri nyore kwazvo. Muchokwadi, zvave zviriko kwemakore akati wandei ikozvino. inowanikwa mumahofisi epamutemo yemazhinji distros, saka kuiisa iwo unongova murairo kure. Kana kupi kugovera kusingawanikwe nekutadza, tinogona zvakare kuwedzera isiri yepamutemo repositi kana kuisa yayo Snap package. Pazasi iwe watsanangura dzakasiyana sarudzo uye kumwe kunyengera kwemitambo isingatange.
1 Maitiro ekuisa MAME pane Linux
1.1 Kubva kumahofisi epamutemo
1.2 Kubva kune isiri yepamutemo repository
1.3 Kubva pane yako Snap package
2 Maitiro ekuwedzera maROM kuMAME
3 Yangu ROM haina kutanga. Zvandinogona kuita?
Maitiro ekuisa MAME pane Linux
Kubva kumahofisi epamutemo
Chinhu chekutanga kuyedza ndechekuti kana ichiwanikwa mune zviri pamutemo marekodhi ekuparadzira kwedu. MuUbuntu uye zvinobva pamurairo iwo unotevera:
Kubva kune isiri yepamutemo repository
Kana tikapinda mumeseji iyo inotiratidza chikanganiso, isu pamwe hatina iyo emulator inowanikwa munzvimbo dzekuchengetedza kwedu, saka isu tinowedzera isiri yepamutemo neinotevera kuraira:
sudo add-apt-repository ppa:c.falco/mame
Mushure mekuwedzera iro repostori, isu tinonyora uyu mumwe kuraira:
sudo apt update && sudo apt install mame
Kubva pane yako Snap package
MAME inowanikwawo seSpap package. Kana kugovera kwedu kuchikwirirana neaya maCanonical mapakeji, kuiisa iri nyore sekutaipa uyu mumwe murairo:
sudo snap install mame
Maitiro ekuwedzera maROM kuMAME
Pane imwe nguva MAME yakaiswa, izvo zvatichava nazvo zvichava emulator pasina chero mitambo. Iyo mitambo isu tinofanirwa kuwedzera ivo nemaoko, asi icho chinhu chiri nyore kwazvo. Chinhu "chakaoma" kuvawana: nekuda kwezvikonzero izvo munhu wese anogona kunzwisisa, hatigone kupa chero zvinongedzo kumapeji anopa maROM, asi kuzviwana zviri nyore sekuwana yedu yekutsvaga yekutsvaga uye kutsvaga chimwe chinhu senge "mame roms" . Mazana emapeji ewebhu achaonekwa uye ese awo anotibvumidza kurodha maROM eMAME uye, mune dzimwe nguva, kune mamwe emulators.
Kupi? isa maROM zvinoenderana nesisitimu yekushandisa uye vhezheni yacho yakadzoswa. Kana isu takaiisa kubva kune yekuchengetera, ingave yepamutemo kana isiriyo, isu tinofanirwa kuisa maROM munzira ~ / mame / roms, uko "~ /" iri yedu yega folda; kana iyo "mame" dhairekitori isipo, tinoigadzira nemaoko. Sezvatinoverenga mukati snapcraft.io, iyo nzira yeiyo Snap vhezheni ndeye ~ / snap / mame / zvakajairika / roms. Kana isu tichida kuisa maROM mune imwe nzira, isu tinofanirwa kugadzirisa iyo faira mame.ini yeiyo software yekutsvaga iyo nyowani nzira.
GNOME Vhidhiyo Arcade: interface yeMAME
Yangu ROM haina kutanga. Zvandinogona kuita?
Chinhu chakaipisisa nezveMAME, pasina kupokana, ndechekuti haasi ese maROM anoshanda pane ese versions ye software. Pane zviitiko, kunyanya kana tikashandisa iyo "nhare" vhezheni, yatino fanirwa kutsvaga yakagadziridzwa maROM, asi dambudziko iri hazviwanzo kuitika mune desktop desktop. Izvo zvinogona kuitika ndezvekuti isu tinoedza kumhanya mutambo uye hazvishande nekuti tiri kushaya faira. Pane zvingasarudzwa zviviri, imwe iri nyore kugadzirisa kupfuura imwe.
Chekutanga uye chinonyanya kuitika ndechekuti mutambo haushande nekuti hatina BIOS yako inowanikwa. MaBIOSes madiki mafaera anodikanwa, ngatiisei seizvi, software kuti ienderane nemamwe mitambo. Semuenzaniso, mitambo yeNeo-GEO haigare ichishanda kana tikasawedzera yavo BIOS. Nzira yakanakisa yekugadzirisa dambudziko iri, zvakare, enda kune yedu yekuda yekutsvaga injini uye utsvage chimwe chinhu senge "mame bios". Kune mafaera anounganidza zvese kana angangoita ese anodikanwa maBIOS uye zvese zvatinofanirwa kuita kuwana imwe uye kuvhura maZIP ese mune imwecheteyo folda «roms» kwatinoisa mitambo.
Rimwe dambudziko ratingawana nderekuti mutambo hautange nekuti unoshaya faira. Izvi zvinonyanya kuoma kugadzirisa. Imwe sarudzo ndeyekutsvaga imwe ROM kuti uone kana ichishanda zvakananga. Kana zvisiri, tinogona kuita zvinotevera:
Isu tinotsvaga internet kune mafaera ayo meseji yekukanganisa inoti haipo.
Isu tinosunungura iyo Zip yeROM iyo isingashande.
Isu tinomanikidza mutambo kudzokera muZIP ine izvo zvaive nemutambo wekutanga uye mafaera atakatsvaga nekutora padanho rekutanga.
Isu tinoisa iro chairo zita rakafanana neiyo yekutanga ZIP (semuenzaniso, aof.zip yemutambo Art of Fighting).
Isu tinoiisa mu "roms" folda uye tinonamata kuti zvese zvifambe zvakanaka.
Unoziva here kuisa MAME paLinux? Ndeipi mitambo yako yaunofarira yechinyakare?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Maitiro ekuisa MAME uye unakirwe neiyi Arcade mutambo emulator pane Linux
Michael Mayol akadaro
Zvinogara zvichinakidza kuverenga nezve MAME, nekutenda nekunyora nezve iyi huru emulator.
Sezvo ini ndanga ndichiishandisa kubva pakutanga kwayo uye ini ndichitevera shanduko yayo zvishoma, ndinokurudzira kuti uwedzere ...
Kuti ichinjika-chikuva uye iri nyore nzira yekunakidzwa neMAME paLinux
Imwe ndeye Retroarch yakabatanidzwa neKODI uye IAGL Internet Archive Game Launcher plugin iyo inoti "Iyo Internet Archive Game Menyu" iyo isingori chete neMAME mitambo; uye kuti mumatafura eAroid uye mobiles zvinokurudzirwa zvakanyanya nekuda kwekuchengetedza munzvimbo yekuchengetera.
Ndinovimba kuverenga zvikamu zvenguva yemberi kana vhezheni yemberi yechinyorwa chino kutora idzi dzimwe nzira.
Pindura Miguel Mayol
QMC2 chishamiso, inozvarwa kuLinux uye kuvandudza kwacho kwakambomira asi kunoshanda zvakakwana, kune yakasarudzika interface iri yakanaka.
RetroArch ndiyo sarudzo yandinoshandisa (isina zvinowedzerwa senge kodi), inovandudza zvakanyanya kutevedzera mune chaiyo uye nekukurumidza.
uye yazvino JRomManager kubata maROM.
Pindura kuna alexb3d
Isa iyo QMC2 kumberi, ndeye navito paLinux uye zvinoshamisa.
Pane chero munhu anoziva kugonesa MAME kubiridzira pane Linux? Izvo zvinofungidzirwa kuti izvozvi unofanirwa kutora .zip faira iro rinobiridzira mune .xml fomati uye riise mune CHEAT dhairekitori iri mune iri mu / usr / yemuno / share / mitambo / mame / kubiridzira kana mune iyo iri mu / usr / share / mitambo / mame / kubiridzira kana iyo iri mu / usr / share / mitambo / mame / plugins / kubiridzira, pakumisikidza nekugadzirisa iyo ui.ini faira mu /home/username/.mame.
Dambudziko nderekuti ini ndinoshandura iyo ui.ini nekuwedzera cheat mutsetse uye kukosha 1 kuimisa, asi kana uchizarura MAME inozvishandura-yega ichisiya iyo sezvairi uye nekudaro hazvigoneke kumisikidza cheats.
Chero mazano kana imwe nzira yekumisikidza iwo?
Pindura kuna Genin
AMD Zen 3 inouya kuLinux kernel ine zvitsva zvazvino
Microsoft Yekushandisa Inspector: chishandiso chekutarisa sosi kodhi yezvirongwa